inkampani Belarusian "Atlant" Sekuyisikhathi eside idume amafriji yayo futhi imishini yokuwasha lapha ukuthi uveza, eyaziwa alilihle. Nokho, njalo ngonyaka bewina emuva isikhala esiningi emakethe endlu Imishini.
Yini ukuheha abathengi Ukugeza Machine "Atlant"? Umsebenzisi Izibuyekezo basikisela ukuthi kuqala kunazo zonke it can ukuletha intengo. imishini abiza kuphi lisuka ezigidini ezingu-7.5 kuya ku-12, okuwenza ezingabizi ngisho abampofu.
Izindleko - lokhu akukona konke edonsela abathengi Ukugeza Machine "Atlant". Izibuyekezo umnikazi idivayisi ibonisa ukuthi okunqumayo ukuthengwa ngokuvamile iba inala izici futhi kulula ukuyisebenzisa ukubonisa.
Ake sicabangele isenzo esisodwa models ethandwa kakhulu "Atlas" - 50S84. Lo mshini ezimele ugeze nge phambi ukulayisha, ukuwasha ekilasini amandla futhi A, esiphezulu spin ijubane 800.
Naphezu eziphansi, umshini iza isibonisi multifunction. Yiluphi ulwazi libonisa umshini wokuwasha "Atlas"? izibuyekezo zamakhasimende, ulwazi abakhiqizi ukukhombisa ukuthi ngokuyinhloko isikhathi esisele kuze kube sekupheleni ukugeza. Ngaphandle sikhathi, ukubonisa ikhombisa Uhlelo ekhethiwe, izinga lokushisa lapho egeza kuyokwenzeka, futhi sivumelekile ubukhulu nohlobo indwangu spin umfutho.
Ngaphezu kwalokho, waqokomisa efanele Inkomba imifanekiso izinhlelo ezengeziwe: sifakwe emanzini, pre-ukugeza, hashaza extra, ayina lula, ephumula amanzi ethangini, ukuvikelwa kwezingane kanye alibale kokuqala timer ukugeza. Ngaphezu kwalezi zinhlelo isibonisi ikhombisa ukusetshenziswa kwamanzi ngamalitha kanye nenani ugesi idliwe ngayinye ukugeza umjikelezo. Ngakho ukubonisa multifunction of the kweminye imihlobo eqhathanisa kahle ne umshini wokuwasha "Atlas". Izibuyekezo Customer abonisa ukuthi ukulawula umshini wokuwasha Kuyinto elula kakhulu futhi kulula, ngisho nabantu abadala. Uhlelo ukhetha isibambo ekhethekile, okuyinto ngomusa uzungeza zombili izinkomba.
Elinye iphuzu plus ngokubonisa ukuthi libonisa izimpawu yokwehluleka futhi ukungasebenzi umshini. Umnikazi ayidingi ukuqagela okuningi iyini inkinga, nje bheka ukuthi uphawu uboniswa esikrinini, bese ukususa ukubhala phezu kwetafula kanye nemiyalelo ukulungisa le nkinga.
I ngesivinini esiphezulu we spin incike imodeli ekhethiwe, futhi zokhahlamba kusuka 800 rev / amaminithi 1200 rev / imiz. Kukhula isivinini, ezweni kuyoba zangaphansi ekupheleni ukugeza, Nokho, izindwangu obucayi, uvolo, kasilika futhi nezindwangu zokwenziwa awukwazi ngisho ngokucindezela ngesivinini. Ngakho 1200 linemibhikisho kuphela efanelekayo ukotini.
Ubukhulu futhi esiphezulu umthwalo futhi kuncike hlobo locingo. "Atlas" niqinile ukhiqiza kokubili ewumngcingo umshini wokuwasha nge nomthwalo 3.5 kg kanye ka 33 cm ukujula kanye ka 51-57 cm Usayizi Okugcwele futhi ukulayisha esiphezulu 6-7 kg ukujula.
Yini enye ukuziqhayisa "Atlas" (umshini wokuwasha)? Izibuyekezo abanikazi ukuyichazela njengoba imishini okuthembekile, nisekeliwe Kulula ukusingatha. Ekuqaleni, le mishini Isiqinisekiso iminyaka 2 nangaphezulu ngaphezu wanikezwa iminyaka emithathu yesevisi khulula. Ngemva kweminyaka embalwa, le abakhiqizi zishintshile amacebo futhi manje model of the inkampani unikezwa oneminyaka emithathu yesiqinisekiso esigcwele.
Ngakolunye uhlangothi, le ukubuyekezwa kwe-egeza imishini "Atlas", eqoqwe izindawo ezihlukahlukene, ukhuluma ngani nesilinganiso encane ukuphepha lezi onobuhle. Njengoba baqala ukunyathelisa akunjalo kudala, ngokusebenzisa ukusebenza eminyakeni emibili, abanye abakhiqizi avele ukukhubazeka ezincane nokushiyeka, kuthinta ukukhathala impahla. Ngaphezu kwalokho, musa ihluke kube ngcono kusuka brand eziningi abadumile ngokuya umsindo vibration.
I-ginger e-marinated. Izakhiwo eziwusizo, i-caloricity, ukuthi yini ongayidla
Umgodi izinyo - into engeyona ingozi noma kufanele sikhathazeke ngalokhu?